Jean Eric Rakotoarisoa : « Tsy nahazo tsindry sy vola ny HCC » -
AccueilRaharaham-pirenenaJean Eric Rakotoarisoa : « Tsy nahazo tsindry sy vola ny HCC »
29/11/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nitondra fanazavana, mahakasika ny fahazoan’ny teo anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) tsindry sy vola ny filohany, Jean Eric Rakotoarisoa, omaly tetsy Ambohidahy Anosy.
Tamin’izany indrindra no nilazany fa tsy nisy velively ny tsindry nahazo azy sy ny mpiara-miasa aminy, nandritra ny fitsarana ny voka-pifidianan’ny fihodinana voalohany tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena avy eny amin’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, na ny CENI. Tsy marina ihany koa, raha ny nambaran’ity filohan’ny HCC ity, ny filazana sy ny nivoizana tamin’ny haino aman-jery fa nandray vola na voavidy vola izy ireo amin’ny fanatanterahana ny asa mialohan’ny namoahana ny voka-pifidianana fihodinana voalohany ôfisialy omaly.
Noho izany, hentitra i Jean Eric Rakotoarisoa nilaza fa niasa an-kitsi-po, ary nanatanteraka ny asany tsy nisy an-tery, ary tsy novidiana vola izy ireo nandritra iny sivy andro nanaovana ny fitsarana ny voka-pifidianana iny hatramin’ny namoahana izany tamin’ny fomba ôfisialy. “Asa masina ho an’ny tanindrazana, ary koa ho an’ny mpiara-belona ny hiandraiketanay eto anivon’ity andrim-panjakana ity. Mifanipaka amin’ny fianianana nataonay ihany koa ny voalazan’ireo haino aman-jery sy nezahin’ireo mpanao politika naely”, hoy hatrany ny filohan’ny HCC.
Ankoatra izay, nitondra fanazavana ihany koa ny tenany mahakasika ilay teratany vahiny nivezivezy tao amin’ny HCC nandritra ny andro maromaro. Nilaza ity laharana voalohany eo anivon’ity andrim-panjakana ity, fa manam-pahaizana vahiny nanatanteraka fitsirihana amin’ny fikirakirana ny voka-pifidianana tao amin’ny HCC fotsiny ihany izany. Nisy mihitsy aza, raha ny nambarany hatrany, mpanao gazety nanatanteraka izany fitsirihana izany teo anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana. Noho izany, hoy izy, malalaka ary miasa malalaka ny HCC fa tsy baikon’iza na iza amin’ny andraikiny, ary koa malalaka ihany koa ny fanaraha-maso matoa nisy mpanao gazety afaka nanatanteraka izany tao…